ओहो ! स्व. अधिकारीले गरेछन् एक बर्षमैं यति धेरै काम – HamroKatha
ओहो ! स्व. अधिकारीले गरेछन् एक बर्षमैं यति धेरै काम
२०६४ र २०७० सालको संविधानसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ कास्की क्षेत्र नं ३ बाट र २०७४ सालको संघीय संसदमा उहाँ कास्की क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । सार्बजनिक लेखा समिति र संसदको बिकास समितिमा सभापति हुँदाको उहाँको भुमिकाले सबैमाझ लोकप्रिय बन्न सफल हुनुभयो । करिब एक बर्ष पर्यटन मन्त्रालयमा काम गरेका स्वर्गिय अधिकारीले यो छोटो समयमा धेरै अविस्मरणीय कामहरु गर्नुभयो ।
हाम्रो कथा २०७५ फागुन २३ गते १८:४४
रवीन्द्र अधिकारी, २०२६ साल बैशाख २२ गते कास्की जिल्लाको भरतपोखरीमा जन्मनुभएको थियो । विद्यार्थी जीवनदेखिनैं उहाँले राजनीति सुरु गर्नुभयो । विद्यार्थी र पार्टीमा विभिन्न तहमा रहेर काम गर्नुभयो । २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ कास्की क्षेत्र नं ३ बाट र २०७४ सालको संघीय संसदमा उहाँ कास्की क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । सार्बजनिक लेखा समिति र संसदको बिकास समितिमा सभापति हुँदाको उहाँको भुमिकाले सबैमाझ लोकप्रिय बन्न सफल हुनुभयो । करिब एक बर्ष पर्यटन मन्त्रालयमा काम गरेका स्वर्गिय अधिकारीले यो छोटो समयमा धेरै अविस्मरणीय कामहरु गर्नुभयो ।
गएको बर्षको तुलनामा यो बर्ष पर्यटक आगमन २५ प्रतिशतले बढ्यो । यो अवधिमा १२ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य बोकेको नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० अभियान यहि बर्ष सुरु भयो । पर्यटकीय स्तरका होटलहरुको अकुपेन्सी दर बढेर ६५ प्रतिशत पुगेको छ भने थप २४ होटल निर्माण भई १ हजार २३ वटा वेड संख्या थपियो ।
सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको बिशेष पहलमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन अवधि १८ घण्टाबाट बढाएर २२ घण्टा पुर्याईएको छ । विमानस्थल २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने उहाँको तयारी थियो ।
यसैका लागि विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतीको काम ३० प्रतिशत सकिएको छ । धावनमार्ग पुर्नस्थापना गर्ने कार्य सुरु हुदैछ । आउँदो असार मसान्त भित्रमा धावनमार्गको काम सक्ने लक्ष्य लिईएको छ ।
त्रिभुवन राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्ट बनाउने घोषणा गर्नुभएपछि पर्यटनमन्त्री अधिकारीले दीर्घकालिन योजना बनाएरै बुटिक एयरपोर्ट निर्माणको थालनी गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।
गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल २०१९ जुनमा परिक्षण उडान गर्ने र सेप्टेम्बरदेखि व्यवसायिक उडान गर्ने तयारी भएको छ । विमानस्थल निर्माणको कार्य ६३ प्रतिशत सकिएको छ ।
मन्त्रि अधिकारीकै गृह जिल्लामा बनिरहेको पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य तोकिएको समयभन्दा अगाडीनैं निर्माण सम्पन्न हुनेगरि तिव्र काम भैरहेको छ ।
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक ११० विघा जग्गामध्ये ६५ विघा जग्गा अधिग्रहण भएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । यस अवधिमा धनगढी र चन्द्रगढी विमानस्थलले रात्री सेवा सुरु गरेका छन् । रात्री सेवा सुरु गर्ने आन्तरिक विमानस्थलको संख्या ६ पुगेको छ । सञ्चालनमा नरहेका १३ आन्तरिक विमानस्थलहरु पर्यटन मन्त्री अधिकारीकै पहलमा सञ्चालनमा आएका छन् ।
दुई वाइडवडी जहाज यहि अवधिमा सञ्चालनमा आए । जापानमा २ बाट १४ र थाईल्याण्डमा १० बाट २८ उडान संख्या वृद्धि भएको छ । कम्बोडियाको उडान संख्या १४ पुगेको छ । हवाई यातायातको अन्र्तराष्ट्रिय उडानहरुमा यात्रुहरुको क्षतिपुर्ति बिमा २० हजार अमेरिकी डलरबाट वृद्धि भई १ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
यसै बर्ष थप एक सय नयाँ पर्यटन गन्तव्य पहिचान गरिएको छ । ९० किलोमिटर पदमार्ग थप निर्माण भएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका क्रममा ५ हजार ६ सय व्यक्तिलाई पर्यटन तालिम दिईएको छ ।
सन् २०१९ मा घुम्नैपर्ने विश्वको १० उत्कृष्ट पर्यटकीय सहरहरुमध्ये काठमाडौं सहर पाँचौ स्थानमा सुचिकृत भएको छ । लुम्बिनीमा ३ हजार व्यक्ति क्षमताको अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनेको छ ।
महाभुकम्पले क्षती पु¥याएका सम्पदाहरुमध्ये यो एक बर्षमा १३२ वटा सम्पदा पुर्ननिर्माण भएका छन् । २२४ वटा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माण भैरहेको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका उपत्यकाका सबै सम्पदाहरु पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएको छ । धरहराको पुर्ननिर्माण तीन बर्ष भित्रमा सक्नेगरि काम सुरु भईसकेको छ ।
नेपाली खानाको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रमोसन र ब्राण्डिङ्ग गर्ने काम तिब्र स्तरमा भएको छ । समग्रमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले एउटा दिशा पकडेको छ ।